स of्कटको समयमा पर्यवेक्षक बोर्डको भूमिका | Law & More B.V.
ब्लग » स of्कटको समयमा पर्यवेक्षक बोर्डको भूमिका
स of्कटको समयमा पर्यवेक्षक बोर्डको भूमिका
हाम्रो बाहेक सुपरवाइजरी बोर्डमा सामान्य लेख (यस पछि 'SB'), हामी पनि संकटको समयमा SB को भूमिकामा ध्यान दिन चाहन्छौं। स crisis्कटको समयमा कम्पनीको निरन्तरताको रक्षा गर्नु पहिलेको भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले महत्त्वपूर्ण विचारहरू हुनुपर्दछ। विशेष गरी कम्पनीको भण्डार र को विभिन्न चासो को सम्बन्ध मा खरिदहरू संलग्न के SB को अधिक गहन भूमिका जायज छ वा यो अवस्थामा पनि आवश्यक छ? यो विशेष गरी COVID-१ the को साथको वर्तमान परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण छ किनभने यस संकटले कम्पनीको निरन्तरतामा ठूलो असर पार्दछ र बोर्ड र एसबीले सुनिश्चित गर्नु पर्ने यो लक्ष्य हो। यस लेखमा हामी व्याख्या गर्दछौं कि यसले कसरी वर्तमान कोरोना स crisis्कट जस्ता संकटको समयमा काम गर्दछ। यसले समग्रमा समाजलाई असर गर्ने संकटको साथसाथै कम्पनी आफैंको लागि महत्वपूर्ण समयहरू पनि समावेश गर्दछ (उदाहरणका लागि वित्तीय समस्या र अधिग्रहण)।
सुपरवाइजरी बोर्डको वैधानिक कर्तव्य
BV र NV को लागी SB को भूमिका DCC को लेख २: १ 2०/२2० को अनुच्छेद २ मा राखिएको छ। यस प्रावधानमा यस्तो लेखिएको छ: “सुपरिवेसरी बोर्डको भूमिका भनेको हो निरीक्षण गर्नुहोस् व्यवस्थापन बोर्डको नीतिहरू र कम्पनीको सामान्य मामिलाहरू र यसको सम्बद्ध उद्यम। यो सहयोग गर्नेछ सल्लाह संग व्यवस्थापन बोर्ड। आफ्नो कर्तव्यहरु को प्रदर्शन मा, सुपरभाइरी निर्देशकहरु द्वारा निर्देशित हुनेछ कम्पनी र यसको सम्बद्ध उद्यमको चासो" सुपरिवेसरी निर्देशकहरूको सामान्य फोकस बाहेक (कम्पनीको रुचि र यससँग सम्बद्ध उद्यम), यस लेखले बढि पर्यवेक्षण जायज हो भनेर कहिले पनि केही भन्दैन।
एसबीको विस्तारित भूमिकाको थप विशिष्टता
साहित्य र केस कानूनमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू विस्तृत गरिएको छ। पर्यवेक्षी कार्य मुख्यतया चिन्तित हुन्छन्: व्यवस्थापन बोर्डको काम, कम्पनीको रणनीति, वित्तीय स्थिति, जोखिम नीति र अनुपालन कानूनको साथ। थप रूपमा, साहित्यले केही विशेष परिस्थितिहरू प्रदान गर्दछ जुन संकटको समयमा देखा पर्न सक्दछ जब त्यस्ता सुपरिवेक्षण र सल्लाह अधिक तीव्र हुन सक्दछ, उदाहरणका लागि:
एक गरीब वित्तीय स्थिति
नयाँ संकट कानूनको पालना
(जोखिमपूर्ण) रणनीति परिवर्तन
बिरामीको अवस्थामा अनुपस्थिति
तर यो वर्धित पर्यवेक्षण केमा समावेश हुन्छ? यो स्पष्ट छ कि एसबीको भूमिका घटना पछि व्यवस्थापनको नीतिलाई अनुमोदन मात्र गर्नु हुँदैन। सुपरिवेसन सल्लाहको साथ जोडिएको छ: जब एसबीले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति र नीति योजनाको सुपरिवेक्षण गर्दछ, यो चाँडै नै सल्लाह दिन आउँदछ। यस सन्दर्भमा, अधिक प्रगतिशील भूमिका पनि एसबीको लागि आरक्षित छ, किनकि व्यवस्थापनले अनुरोध गरेपछि मात्र सल्लाह दिन आवश्यक पर्दैन। विशेष गरी स crisis्कटको समयमा, चीजहरूको शीर्षमा रहन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसमा नीति र रणनीति वर्तमान र भविष्यको आर्थिक अवस्था र कानुनी नियमहरूसँग मिल्दो छ कि छैन भनेर जाँच्न सक्दछ, आलोचनात्मक रूपमा पुनर्संरचनाको वांछितताको परीक्षण गर्दै र आवश्यक सल्लाह दिने। अन्तमा तपाईको नैतिक कम्पासको प्रयोग गर्नु र विशेष गरी वित्तीय पक्षहरु र जोखिमहरु भन्दा परे मानवीय पक्ष हेर्नका लागि यो महत्वपूर्ण छ। कम्पनीको सामाजिक नीतिले यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनकि कम्पनी मात्र होइन ग्राहक, कर्मचारी, प्रतिस्पर्धा, आपूर्तिकर्ता र सम्भवतः सम्पूर्ण समाज संकटबाट प्रभावित हुन सक्छ।
विस्तारित निगरानीको सीमा
माथिको आधारमा, यो स्पष्ट छ कि स of्कटको समयमा एसबीको अधिक गहन भूमिकाको आशा गर्न सकिन्छ। यद्यपि, न्यूनतम र अधिकतम सीमा के हो? आखिर, यो महत्त्वपूर्ण छ कि एसबीले दायित्वको सही स्तर ग्रहण गर्छ, तर के यसको सीमा छ? एसबीले पनि कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न सक्दछ, उदाहरणका लागि, वा त्यहाँ अझै कर्तव्यहरु का एक कडाई अलग छ जहाँ डच सिभिल कोड बाट स्पष्ट देखिन्छ मात्र कम्पनी को प्रबन्धन को लागी व्यवस्थापन बोर्ड जिम्मेवार छ? यो खण्डले कसरी चीजहरू गर्ने र नगर्नु पर्ने उदाहरणहरू प्रदान गर्दछ, इन्टरप्राइज चेम्बर अघि कार्यवाहीको संख्यामा आधारित।
एसबीले कसरी काम गर्दैन भन्ने केही उदाहरणहरू दिन, हामी सर्वप्रथम प्रसिद्धबाट केही उदाहरणहरू उल्लेख गर्नेछौं OGEM केस यो मामला एक दिवालिया उर्जा र निर्माण कम्पनीको चिन्ता हो, जहाँ एक जांच प्रक्रियामा शेयरधारकहरूले इन्टरप्राइज चेम्बरलाई सोधे कि त्यहाँ कम्पनीको उचित व्यवस्थापनमा शंका गर्ने आधारहरू छन् कि छैनन्। यो उद्यम चेम्बर द्वारा पुष्टि गरीएको थियो:
"यस सम्बन्धमा, इन्टरप्राइज चेम्बरले पर्यवेक्षण बोर्डको स्थापना गरिएको तथ्यको रूपमा लिएको छ, संकेतहरूको बाबजुद जुन यसले विभिन्न रूपहरूमा पुगेको छ र जसले यसलाई थप जानकारीको लागि सोध्नुपर्ने कारण दिनुपर्दछ, यस सम्बन्धमा कुनै पहल विकास गरेन र हस्तक्षेप गरेन।। यस बहिष्कारको कारणले, इन्टरप्राइज चेम्बरका अनुसार निर्णय लिने प्रक्रिया ओगेम भित्र हुन सक्षम भयो, जसको परिणामस्वरूप वार्षिक रूपमा ठूलो घाटा भयो, जुन अन्ततः कम्तिमा FL मा परिणत भयो। २०० मिलियन, जुन अभिनयको एक लापरवाह तरीका हो।
यस धारणाको साथ, इन्टरप्राइज चेम्बरले ओगेम भित्र निर्माण परियोजनाहरूको विकासको सन्दर्भमा तथ्य व्यक्त गरे, असंख्य निर्णयहरू लिइयो जसमा ओगेमको सुपरिवेटरी बोर्डले आफ्नो सुपरिवेक्षण भूमिका राम्ररी पूरा गरेको छैन वा गरेन, जबकि यी निर्णयहरूले यी निर्माण परियोजनाहरूले गर्ने घाटालाई हेरेर ओगेमको लागि ठूलो महत्त्व राखेका थिए।। "
स crisis्कटको समयमा एसबीले कुप्रबंधनको अर्को उदाहरण हो लौरस केस यस केसले एक पुनर्गठन प्रक्रिया ('अपरेशन ग्रीनल्याण्ड') मा एक सुपरमार्केट चेन संलग्न गरेको थियो जसमा करीव 800०० दुकाइ एकल सूत्रमा सञ्चालन हुनु पर्ने थियो। यस प्रक्रियाको वित्तपोषण मुख्यतया बाह्य थियो, तर यो आशा गरिएको थियो कि यो गैर-कोर गतिविधिहरूको बिक्रीको साथ सफल हुनेछ। यद्यपि यो योजना अनुसार चलेन र एक पछि अर्को त्रासदीका कारण कम्पनी आभासी बैंकरप्ट पछि बेच्नुपर्‍यो। इन्टरप्राइज चेम्बरका अनुसार एसबी अधिक सक्रिय हुनुपर्दछ किनभने यो महत्वाकांक्षी र जोखिमपूर्ण परियोजना थियो। उदाहरणको लागि, उनीहरूले बिना मुख्य बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए खुद्रा अनुभव, को ब्यापार योजना को कार्यान्वयन को लागी नियन्त्रित नियन्त्रण क्षण हुनु पर्छ र कडा पर्यवेक्षण लागू गर्नु पर्छ किनभने यो एक स्थिर नीति को मात्र निरन्तरता थिएन।
मा एनेको अर्को तर्फ, कुप्रबन्धको अर्को रूप पनि थियो। यहाँ सार्वजनिक शेयरधारकहरू (जसले संयुक्त रूपमा एक 'शेयरधारक समिति' गठन गरेका थिए) निजीकरणको अपेक्षामा उनीहरूको सेयर बेच्न चाहन्थे। शेयरधारक समिति र एसबी बीच र शेयरधारक समिति र व्यवस्थापन बीच झगडा भएको थियो। एसबीले व्यवस्थापन बोर्डसँग परामर्श नगरी सेयरधारक समितिमा मध्यस्थता गर्ने निर्णय गर्‍यो, जुन पछि उनीहरू सम्झौतामा पुगे। नतिजा स्वरूप, कम्पनी भित्र अझ बढी तनाव उत्पन्न भयो, यस पटक एसबी र व्यवस्थापन बोर्ड बीच।
यस अवस्थामा, इन्टरप्राइज चेम्बरले SB का कार्यहरू व्यवस्थापनको कर्तव्यबाट धेरै टाढा हटाएको फैसला सुनायो। एन्कोको शेयरधारकहरूको सम्झौताले एसबी, ब्यवस्थापन बोर्ड र सेयरको बिक्रीमा सेयरधारकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्ने कुरा भनेको छ। एसबीले यस विषयमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने थिएन।
यसैले यस केसले स्पेक्ट्रमको अर्को पक्ष देखाउँदछ: निन्दा केवल पारसिभिटीको बारेमा मात्र होईन तर यसले अति सक्रिय (प्रबन्धकीय) भूमिका पनि लिन सक्छ। स active्कटको अवस्थाहरूमा कुन सक्रिय भूमिका अनुमति छ? यो निम्न केसमा छलफल गरिएको छ।
टेलिग्राफ मिडिया ग्रूप (ECLI: NL: GHAMS: 2017: 930)
यो केस समाचार, खेलकुद र मनोरन्जनमा केन्द्रित एक प्रसिद्ध मिडिया कम्पनी टेलिग्राफ मिडिया ग्रूप एनवी (पछि 'टीएमजी') को अधिग्रहणको विषय हो। टेकओभरका लागि त्यहाँ दुई उम्मेद्वारहरू थिए: तल्पा र वीपीई र मिडियाहुइसको कन्सोर्टियम। टेकओभर प्रक्रिया बरु अपर्याप्त जानकारीको साथ ढिलो थियो। बोर्ड मुख्यतया तलपामा केन्द्रित थियो, जुन एक बनाएर अधिकतम शेयरधारकको मानसँग विवादास्पद थियो स्तर खेल मैदान। शेयरधारकहरूले यस बारे एसबीमा गुनासो गरे जसले व्यवस्थापन बोर्डमा यी गुनासोहरू पठायो।
अन्तत: बोर्ड र एसबीका अध्यक्षले थप वार्ता गर्न रणनीतिक समिति गठन गरे। अध्यक्षको भोट थियो र उनले कन्सोर्टियमसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरे किनभने टल्पा बहुमत शेयरधारक बन्ने सम्भावना कम नै थियो। बोर्डले मर्जर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्‍यो र यसैले एसबीले खारेज गर्यो। बोर्डको सट्टा, एसबीले प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दछ।
तल्पा टेकओभरको नतिजासँग सहमत भएन र एसबीको नीतिको अनुसन्धान गर्न इन्टरप्राइज च्याम्बरमा गयो। ओआरको रायमा, एसबीको कार्यहरू उचित थिए। यो विशेष गरी महत्वपूर्ण थियो कि कन्सोर्टियम बहुमत शेयरधारक रहन सक्दछ र छनौटको कारण बुझ्न सकिन्छ। इन्टर्प्राइज चेम्बरले स्वीकार्यो कि एसबीले व्यवस्थापन संग धैर्य गुमायो। बोर्डको मर्जर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार कम्पनीको हितमा थिएन किनकि टीएमजी समूहमा उत्पन्न भएको तनावको कारण हो। किनकी एसबीले व्यवस्थापनसँग राम्रोसँग कुराकानी गरिरह्यो, यसले कम्पनीको चासो पूरा गर्ने कार्यलाई बढी पार गर्‍यो।
यो अन्तिम केसको छलफल पछि, निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि व्यवस्थापन बोर्ड मात्र होइन, एसबीले पनि संकटको समयमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। यद्यपि COVID-१ p महामारीमा कुनै विशेष केस कानून छैन, यो माथि उल्लिखित निर्णयहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि परिस्थितिको दायरा बाहिर परेको खण्डमा SB ले एक समीक्षा भूमिका भन्दा बढी खेल्नु पर्छ। सामान्य व्यापार संचालन (OGEM र लौरस). एसबीले निर्णायकको भूमिका पनि लिन सक्दछ यदि कम्पनीको चासो जोखिममा छ भने, यो प्रबन्ध बोर्डको सहयोगमा सकेसम्म सम्भव भएसम्म, जुन यस बीचको तुलनाको आधारमा हुन्छ। एनेको र TMG.
संकटको समयमा पर्यवेक्षण बोर्डको भूमिकाका बारे के तपाइँसँग केही प्रश्नहरू छन्? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरू कर्पोरेट कानूनको क्षेत्रमा अत्यधिक कुशल छन् र तपाईलाई मद्दत गर्न सँधै तयार छन्।
अघिल्लो पोस्ट पर्यवेक्षण बोर्ड